बैंकिङ मुभमेन्ट – Page4– Banking Khabar
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अध्यक्षमा पृथ्वीबहादुर पाँडे
बैंकिङ खबर । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अध्यक्षमा पृथ्वीबहादुर पाँडे नियुक्त भएका छन् । बैंकको कात्तिक १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पाँडेलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । पृथ्वीबहादुर पाँडे नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका ‘पायोनियर’ हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट करिअर सुरु …
सेञ्चुरी बैंकको नेतृत्व लिँदै ‘अनिल केशरी शाह’
बैंकिङ खबर । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले अनिल केशरी शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नियुक्त गरेको छ । बैंकले नेप्सेलाई दिएको जानकारी अनुसार, पुस १७ गतेदेखि नवनियुक्त सीईओ शाहले सेञ्चुरी बैंकमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् । सेञ्चुरी बैंकको विहीबार(कात्तिक १६ …
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सीईओमा विष्णुबाबु मिश्र
सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मा बिष्णुबाबु मिश्रलाई नियुक्त गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सिफारिस समितिले पठाएका तीन नाम मध्येबाट मिश्रलाई नियुक्त गरेको हो। २६ बर्षअघि प्रधान सहायकको रुपमा कोष प्रवेश गरेका मिश्र पछिल्लो …
एनबिआईको अध्यक्षमा लक्ष्मी प्रपन्न निरौला नियुक्त
नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (एनबिआर्इ)को अध्यक्षमा लक्ष्मी प्रपन्न निरौला नियुक्त भएका छन्। एनबिआर्इको विहिबार बसेको संचालक समिति बैंठकले निरौलालार्इ अध्यक्षमा मनोनित गरेको हो। उनी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन्। एनबिआर्इ संचालक समिति सदस्यहरुमा एभरेष्ट बैंकका नायव महाप्रबन्धक राजीव जैन, लक्ष्मी बैंकका …
एनआईसी एशिया क्यापिटलको सिईओमा झनकराज ढुंगेल नियुक्त
एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)मा झनकराज ढुंगेल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको ३४औं संचालक समितिको बैठकले ढुंगेललाई सिईओमा नियुक्त गरेको हो । विगत २३ वर्षदेखि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत ढुंगेल अरनिको विकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए …
सेञ्चुरी बैंकको कामु सिईओमा जीवन भट्टराई
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको आइतबार(असोज १ गते) बसेको सञ्चालक समितिको २४२औं बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुज मणी तिमिल्सिनाको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । सोही बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराईलाई कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको …
ग्लोबल आईएमई बैंकको कामु सीईओमा पौड्याल नियुक्त
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जनक शर्मा पौड्याल नियुक्त भएका छन् । अनिल ज्ञवालीले दुई बर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै बैंक छाडेपछि पौड्याल काम प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भएका हुन्। यसअघि उनी ग्लोबल आईएमई बैंकमा नै नायब प्रमुख कार्यकारी …
झन्डै एक दर्जन बैंकमा फेरिए प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सुष्मा थापा । पछिल्लो समय धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भएका छन् । कुनै बैंकमा पूरानै सीईओ फर्केका छन् भने कुनैमा अर्को बैंक छोडेर आएका छन् । कुनै बैंकमा कार्यकाल सकिएर विदा भएका छन् भने कुनै …
साना किसान विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. कोइराला
साना किसान विकास बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा डा शिवराम प्रसाद कोइराला नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको बुधबारको बैठकले डा. कोइरालाई सीईओ नियुक्त गरेको छ । उनी चार वर्षका लागि साना किसान विकास बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका …
शोभनदेव पन्तको आगमनले बैंक अफ काठमाण्डूलाई आशा बढायो
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा शोभन देव पन्तको नियुक्तिसँगै अब बैंक अफ काठमाण्डू अझ सबल भएर जाने अपेक्षा गरिएको छ । आइतबार (भदौ ४ गते)देखि आफ्नो कार्यभार साम्हालेका पन्त बैंकिङ क्षेत्र सुधारका हस्तीका रुपमा चिनिन्छन् । तत्कालिन लुम्बिनी …
सिद्धार्थ बैंकको सिईओमा गौतम नियुक्त
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)मा शम्भुनाथ गौतम नियुक्त भएका छन् । बैंक संचालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले गौतमलाई विहीबार (आज)देखि लागू हुनेगरी बैंकको आगामी कार्यकालका लागि सिईओ नियुक्त गरेको हो । यसअघि सिद्धार्थ बैंकमै डेपुटी सीईओको रुपमा कार्यरत …
सिभिल बैंकको सीईओमा गोबिन्द गुरुङ नियुक्त
सिभिल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गोबिन्द गुरुङ्ग नियुक्त भएका छन् । किशोर महर्जनको पदावधि साउन १२ गते सकिएपछि गुरुङले सीईओको कार्यभार सम्हालेका हुन् । गत वैशाख १२ गते देखि का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत गुरुङ हालका प्रमुख कार्यकारी …
कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा सेंजुवाल नियुक्त
कृषि बिकास बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा क्षेत्र बहादुर सेंजुवाल नियुक्त भएका छन् । बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका सेंजुवाललाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरंजीबि नेपालले सपथ ग्रहण गराएका छन् । उक्त अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर …
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको सञ्चालक समितिमा भरतराज ढकाल नियुक्त
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको सञ्चालक समितिमा मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकाल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको असार १३ गते बसेको १०१औं सञ्चालक समितिको बैंठकले विकास बैंक समूहमा ढकाललाई नियुक्त गरेको हो । उनी डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालका …